आफ्नो शरीर आफ्नै हक
नेपालमा पनि महिलाहरुलाई बिहे नगरे पनि बच्चा जन्माउन पाउने हक भएको कानुन आउँदैछ । त्यसै पनि नेपाली युवतीहरु खाडी मुलुकतिर बैध अवैध तरिकाले सुखी जीवन खोज्न गइरहेका छन् र बिना बाउका सन्तान बोकेर आइरहेका छन् । कति मानसिक सन्तुलन गुमाएर पनि आएको भेटिन्छ ।
नेपालमै गरिखान पाएको भए यी युवतीहरु किन यसरी विदेशीन्थे ? यिनलाई दलालले फकाई फकाई किन लानसक्थे ? आजकल त नेपाली युवतीको गोरो छालाका लागिसमेत युवतीहरुलाई अवैध मार्गबाट विदेश लैजाने होडबाजी नै चलेको छ । तान्जानियाजस्ता मुलुकमा समेत धनाध्येहरुले ुवती मगाउने गर्छन् ।
धयचमि दगििभतष्लन।लभत मा पढ्दा थाहा हुन्छ, नेपालमा बाबु नभएका आमाका सन्तान धेरै छन् । भूकम्प गएपछि बालबालिकाको तस्करी ज्यादा बढेको छ । बालगृहहरुमा पुर्‍याइएका यस्ता बालबालिकाहरुको बिजोग छ । भूकम्पपछि नेपालबाट मानव बेचबिखनको दुष्कर्म धेरै बढेको छ । यसमाथि अव कानुनले नै बिहे नगरे पनि आमा बन्ने अधिकार दिन लागेकाले बालबालिका र महिलाहिंसा कति बढ्ला, चिन्ता कम देखिन्छ ।
विदेशमा चर्चित यो मुद्दा नेपालमा पनि खुव चर्चामा छ : ‘आफ्नो शरीर, आफ्नै हक’ । यौन तथा प्रजनन हकमा विद्यमान पितृसत्ताको नियन्त्रणविरुद्ध कडा चुनौती मानिएको यो मुद्दाले नेपालमा पनि महिलालाई विवाह नगरे पनि बच्चा जन्माउन पाउने हक दिलाउने छ । त्यसै पनि नेपालमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटना, छोरी भए भ्रुण हत्या र गर्भपतनका घटना कहालीलाग्दो छ । अव असोज ३ भित्र आउने समानताको आवरणको कानुनले कस्तो रङ्रुप देखाउने होला ?
त्यसै पनि यौनकर्मी र बाध्यताले यौन व्यवसायमा लागेकाहरु जे छ त्यही बेच्ने हो, शरीर बेचेकै हो भनेर प्रहरीलाई कायल पार्छन्, अव के होला, के नहोला ?